बाहिरियो २० करोडको घोटला, सर्वसाधरणको लगानीमाथि खेलवाड | Citizen Post News
बाहिरियो २० करोडको घोटला, सर्वसाधरणको लगानीमाथि खेलवाड
२०७४ फागुन ६ गते १९:३६
काठमाडौँ । सर्वसाधारण जनताको लगानी रहेको सनराइज बैंक डुबाउने अर्को श्रृंखला सुरु भएको छ । घर-जग्गामा लगानी गरेर एक-पटक टाट पल्टिन लागेको सनसाइज बैंकमा फेरी अर्को घोटाला सार्वजनिक भएको छ । उक्त काण्ड अरु केही नभई कमलपोखरीस्थित सनराइज क्यापिटल भवनसँगै रहेको ५० आना जग्गा खरिद प्रकरणमा करोडौं घोटाला गर्ने षड्यन्त्रको तानाबुना तयार भएको हो ।
खरिद प्रक्रियाका क्रममा रहेको उक्त जग्गा बजारमुल्य भन्दा बढि मुल्यमा खरिद गर्न लागेपछि बैंकभित्रै बाट उक्त काण्डलाई बैंक डुबाउने खेलका रुपमा लिइएको छ । बैंक स्रोतकाअनुसार उक्त ५० आना जग्गा वाङेल लामाको नाममा रहेको छ । उक्त जग्गाको बजार मुल्य प्रतिआना ४० देखि ५० लाख पर्छ । तर बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य समेतको संलग्नतामा उक्त जग्गा प्रतिआना एक करोड रूपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय भएपछि यो प्रकरण बाहिरिएको हो ।
गत विहीवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिआना एक करोडका दरले ५० आना जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सनराइज बैंकको अध्यक्ष मोतीलाल दुगड हुन् भने सञ्चालकहरूमा भूपेन्द्र गुरागाई, वच्छलाल तातड, मालचन्द्र दुगड, डा. दीपकप्रकाश भट्टराई, दीपक नेपाल, ज्योतिकुमार बेगानी, ओमकृष्ण जोशी सञ्चालक रहेका छन् । बैंक स्रोत भन्छ, '५० करोडमा खरिद गर्न लागिएको यो प्रकरणमा सञ्चालक समिति र कार्यकारी अधिकृतबाहेक बैंकका डेपुटी जीएम रोविन नेपालको पनि मिलेमतो छ । उक्त प्रकरणमा महंगोमा जग्गा किन्न नहुने भन्दै विरोध गर्ने सञ्चालकलाई पनि अन्य सञ्चालकले मुखमा बुझो लगाएका छन् ।'
चलनचल्तीको मुल्य अनुसार उक्त जग्गाको अधिकतम मुल्य ३० देखि ३५ करोड पर्छ । उक्त जग्गा खरिद प्रकरणमा करिब १५ देखि २० करोड मिलेमतोमा घोटला हुँदैछ । सर्वसाधारण जनतातको लगानी परेको बैंकमा सञ्चालक र बैंकका अधिकृत मिलेर लुट मच्चाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? सो विषयमा जानकारी लिन बैंकका सीईओ रत्नराज बज्राचार्यलाई कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।